I-Urinalysis yesifo sikashukela > Ukuxilonga
Igazi likashukela: okwejwayelekile, isifo sikashukela kanye ne-prediabetes
Ukuvela kwesifo sikashukela kuhlotshaniswa nokungalingani ekusebenzeni kwezindlala ze-endocrine. Isifo sikashukela sibonakaliswa ukuthathwa kweglucose engasebenzi kahle kanye nokukhiqizwa okunganele kwe-insulin, i-hormone ethinta imitha emzimbeni kwezicubu eziningi zomzimba.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuthola ukuthi ngabe ushukela wokuqina ushukela emzimbeni uyanda yini nokuthi ngabe kukhona ezinye, iziphazamiso ezibangelwa yi-metabolic. Ukuhlolwa komchamo kwesifo sikashukela kungenye indlela enjalo.
Izinhlobo eziphambili zesifo sikashukela
Umgomo oyinhloko we-insulin ukwehlisa ushukela wegazi. Izinkinga ezihambisana nalesi hormone zinquma ukukhula kwesifo sikashukela, esihlukaniswe yizinhlobo ezi-2:
Thayipha isifo esingu-1. Ikhula ngenxa yokungasebenzi okwanele kwe-pancreas ye-hormone enquma ukulawulwa kwe-carbohydrate metabolism.
Isifo sohlobo 2. Lokhu kwenzeka uma umphumela we-insulin kwizicubu zomzimba ungenzi kahle.
Ngabe kuthathwa kanjani i-urinalysis?
Le nqubo ifanelekile kulezi zimo ezilandelayo:
uma kukhona uphawu olukhombisa isifo sikashukela
uma kunesidingo, lawula inkambo yesifo,
Ukunquma ukusebenza kwekhambi lokwelashwa,
ukuze kuhlolwe ukusebenza kwezinso.
Ungawudlulisa kanjani umchamo wokuhlaziywa
Ukuhlaziywa kwe-glucose kubandakanya ukulethwa kwengxenye eyodwa yomchamo. Ngokuzimela ungaqhuba isifundo usebenzisa imichilo ekhethekile yokulahlwa. Ngosizo lwabo, unganquma ukuthi umchamo ushintsha kanjani. Imichilo yenkomba isiza ukukhomba ubukhona bokungasebenzi kahle kumetabolism, futhi ifunde nge-pathology ekhona yezinso. Ukuhlaziywa okunjalo kuthatha imizuzu engekho ngaphezulu kwe-5 futhi akudingi amakhono akhethekile. Umphumela unqunywa ngokubonakalayo. Kwanele ukuqhathanisa umbala wengxenye yenkomba yomucu nesilinganiso esinyathelisiwe kwiphakheji.
Lokho ukuhlaziya okuzokutshela
Ucwaningo lukuvumela ukuthi unqume ubukhona beshukela emchameni. Ukuba khona kwayo kukhombisa i-hyperglycemia yomzimba (ukugcwala okukhulu kweglucose egazini) - uphawu lwesifo sikashukela. Emchameni womuntu ophile kahle, okuqukethwe i-glucose akubalulekile futhi kucishe kube ngu-0.06 - 0,083 mmol / L. Ukwenza ukuhlaziya okuzimele usebenzisa umucu wesikhombisi, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukufakwa kwenzeka uma inani loshukela lingaphansi kuka-0,1 mmol / l. Ukuntuleka kwamabala kukhombisa ukuthi ukugcwala kwe-glucose kumchamo akunakwa.
Kwenzeka ukuthi ukumunca i-glucose kuthinteke ezinsweni. Lokhu kuholela kokuvela kwe-renal glycosuria. Kulokhu, ushukela uyatholakala emchamweni, kepha egazini okuqukethwe kwalo kuhlala kuyinto evamile.
I-acetone etholakala kumchamo nayo ingakhombisa isifo sikashukela. Ukwanda kokuxineka kwe-acetone egazini kufaka ukubonakala kwe-acetone emchameni. Lesi simo sivamile kwisifo sohlobo 1, lapho ushukela wegazi ukhuphuka wafika ku-13.5 kuya ku-16,7 mmol ilitha ngalinye.
Enye yezimpawu zesifo sikashukela ukubonakala kwegazi emchameni. Lokhu kungenzeka uma ukuthuthukiswa kwalesi sifo kwaqala eminyakeni engaphezu kwengu-15 eyedlule futhi kwenzeka ukwehluleka kwezinso.
Ukuhlaziywa kwamaprotheni ephelele kukuvumela ukuthi ukhombe ukukhipha kakhulu kwamaprotheni kumchamo. I-Microalbuminuria iwuphawu lomsebenzi wokuphazamiseka wezinso kusifo sikashukela.
Isifo sikashukela: okubonakalayo nokuthi ubani ogulayo
Kuyaqabukela isifo sikashukela. Iziguli ezihlaselwe yilesi sifo zinokoma okungeyona ngokwemvelo. Ukuze umenelise, isiguli kufanele sonyuse kakhulu amanzi nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo sihambisana nokukhishwa komthamo omkhulu womchamo osuka emzimbeni (amalitha ama-2-3 lapho ungqongqotha). Ukuchama ngesifo sikashukela i-insipidus kungaba kaningi. Lesi sifo senzeka kunoma yisiphi ubudala futhi asincikile ebulilini.
Ngalesi sifo, usizi lomchamo luyancipha. Ukunquma ukuncipha kwayo phakathi nosuku, ukuqoqwa komchamo kwenzeka izikhathi ezi-8 ngosuku.
Ngabe ingane ingaba nesifo sikashukela?
Ngeshwa, isifo sikashukela siyatholakala nasezinganeni. Imvamisa lokhu kwenzeka ngengozi ngesikhathi kuhlolwa umchamo noma igazi ukuthola noma yisiphi isifo.
Isifo sohlobo 1 siyazalwa, kodwa kunengozi yokukuthola ebusheni noma ebusheni.
Isifo sikashukela esincike ku-insulin (uhlobo 2) singakhula hhayi kubantu abadala kuphela, kodwa nasezinganeni. Uma ukugcwala koshukela kungekho ezingeni elibucayi elichaza isifo sikashukela, ungathinta ukuthuthuka okuqhubekayo kwalesi sifo. Kulokhu, izinga loshukela liqiniswa ngokudla okukhethekile okukhethwe udokotela.
Ukuhlolwa komchamo kokuqukethwe ushukela kuyindlela elula kepha efundisayo. Ukutholwa kwe-glucose kumchamo akuvezi njalo isifo sikashukela. Ukuhlushwa ushukela kuthonywa ukudla, ukusebenza ngokomzimba kanye nesizinda semizwa. Ukuxilongwa kungenziwa kuphela udokotela onguchwepheshe, enikezwe imiphumela yokuhlolwa kwesiguli eminingana.
Ukudla ngesifo sikashukela. Yiziphi izivivinyo okumele uzithathe nesifo sikashukela
IGlucose, ushukela, ushukela. Akekho umuntu emvelweni ongawazi la magama. Wonke umuntu wesaba isifo sikashukela, ngakho-ke ukuhlolwa kwegazi ngoshukela, njengomthetho, kuvame ukunikezwa nangokuzithandela. UDkt Anton Rodionov uchaza ukuhlolwa kwegazi okusetshenziselwa ukuthola isifo sikashukela, utshela ukuthi siyini isifo sikashukela nokuthi yikuphi ukudla okufanele kulandelwe yisifo sikashukela.
Ngempela, kanye ne-cholesterol, igazi likashukela linganikezwa futhi kufanele linikezwe "uma kwenzeka" ngisho nasezinganeni. Ungacabangi ukuthi isifo sikashukela yisifo esidala. Ezithombeni ezinentsha yokukhuluphala, uhlobo lwesifo sikashukela esi-2 sitholakala njalo njalo - lokhu kuyinkokhelo ngosuku lokuhlala ekhompyutheni enama-chip neCoca-Cola, ukuthola amasangweji ngokugijima.
Kodwa into ebaluleke kakhulu futhi engathandeki kunazo zonke ukuthi uhlobo 2 sikashukela ekuvulekeni alunazimpawu. Ezinyangeni zokuqala, futhi kwesinye isikhathi iminyaka yokugula, kuyilapho izinga likashukela lingasasebenzi "okwamanje, isiguli ngeke sibe nokoma, noma ukuchama ngokushesha, noma ukuthikamezeka okubukwayo, kepha lesi sifo sesiqala ukubhubhisa izicubu.
Isifo sikashukela i-mellitus sibizwa ngezifo ezimbili ezihluke ngokuphelele. Isifo sikashukela sohlobo loku-1 yisilonda esizenzakalelayo samaseli we-pancreatic beta adinga ukwelashwa esikhundleni se-insulin.
Isifo sikashukela sohlobo 2 yisifo esisuselwa ekunciphiseni kokuzwela kwezicubu kwe-insulin. Imvamisa, lapho bekhuluma ngesifo sikashukela kubantu abadala, basho uhlobo lwe-2 sikashukela mellitus. Sizokhuluma ngaye.
Ukuhlolwa kwegazi ushukela: okwejwayelekile kanye ne-prediabetes
Ngakho-ke, sathola ukuhlolwa kwegazi. Izinga lokudla okushukela elijwayelekile aliphezulu kune-5.6 mmol / L. Inani lokubhula lokuxilongwa kwesifo sikashukela lisuka ku-7.0 mmol / l nangaphezulu. Futhi yini ephakathi kwabo?
Izinkomba I-Norm * (amanani aqondisiwe) I-Hyperglycemia esheshayo Isifo sikashukela mellitus
Ijubane loshukela, mmol / L 3,5-5,5 5,6-6,9 ≥7,0
I-glucose (amahora amabili ngemuva komthwalo we-carbohydrate), mmol / l 30%, ukhilimu, ukhilimu omuncu, imayonesi, amantongomane, imbewu,
ushukela, kanye ne-confectionery, amaswidi, ushokoledi, ujamu, ujamu, uju, iziphuzo ezimnandi, u-ayisikhilimu,
Nemithetho embalwa elula ezoba usizo kulabo abanamazinga aphezulu kashukela
Yidla imifino eluhlaza nezithelo, engeza uwoyela no-ukhilimu omuncu kwisaladi kukhulisa okuqukethwe kwabo kilojoule.
Khetha ukudla okunamafutha amancane. Lokhu kusebenza yoghurt, ushizi, ukhokho ushizi.
Zama ukungakuthosi ukudla, kepha upheke, ubhake noma ukhiphe isitshulu. Izindlela ezinjalo zokulungisa zidinga uwoyela omncane, okusho ukuthi okuqukethwe ikhalori kuzokwehla.
"Uma ufuna ukudla, yidla i-aphula. Uma ungafuni i-apula, awufuni ukudla." Gwema ukudonsa ngamasangweji, ama-chip, amantongomane, njll.
Isifo sikashukela: yiziphi izivivinyo okufanele uzithathe
Ake sibuyele ekuhlaziyeni kwethu. Ushukela wegazi onesilinganiso esiphindwe kabili> 7.0 mmol / L usuvele ushukela. Kulesi simo, iphutha elikhulu ukuzama ukwelapha ngaphandle kwemithi futhi "uqhubeke nokudla."
Cha, bangane abathandekayo, uma ukutholwa kusunguliwe, khona-ke imishanguzo kufanele ibekwe ngokushesha. Njengomthetho, baqala nge-metformin efanayo, bese kunezelwa izidakamizwa zamanye amaqembu. Impela, ukwelashwa kwezidakamizwa sikashukela akusivimbeli nakancane isidingo sokunciphisa umzimba futhi kubuyeketa nokudla kwakho.
Uma okungenani uke wabona ukunyuka kwe-glucose, qiniseka ukuthi uthenga i-glucometer futhi ulinganise ushukela ekhayaukuze ukwazi ukubona isifo sikashukela ngaphambili.
Izinkinga ze-carbohydrate metabolism zivame ukuhambisana nokukhuphuka kwe-cholesterol ne-triglycerides (futhi, ngendlela, i-arterial hypertension), ngakho-ke, uma kutholakala ukuthi isifo sikashukela noma ngisho ne-prediabetes, qiniseka ukuthi uyokwenza uhlolo lwegazi ukuze uthole i-lipid spectrum futhi ulawule umfutho wegazi.
I-glucose esegazini ishintsha njalo ngeminithi, lokhu kuyinkomba engazinzile, kepha i-glycated hemoglobin (kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-"glycosylated hemoglobin" noma i-HbA1C kwelebhu engenalutho) iyinkomba yokubuyelwa isikhathi eside kokudla okwenziwe nge-carbohydrate metabolism.
Njengoba wazi, i-glucose eyeqile emzimbeni ilimaza cishe zonke izitho nezicubu, ikakhulukazi uhlelo lokujikeleza nezinzwa, kepha aludluleli amangqamuzana egazi. Ngakho-ke i-glycated hemoglobin (ivezwa njengephesenti) yingxenye “yamangqamuzana abomvu egazi” ahunyushelwe olimini lwesiRussia.
Isilinganiso esiphakeme salokhu sikhomba, sibi kakhulu. Kumuntu ophile kahle, inani le-hemoglobin ye-glycated akufanele lidlule ku-6.5%, ezigulini ezinesifo sikashukela esithola ukwelashwa, leli nani lokubhekiswa libalwa ngawodwana, kepha lihlala lisondele ku-6.5 kuya ku-7.5%, futhi lapho uhlela ukukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa, izidingo zale nkomba ziqine kakhulu: akumele zidlule ku-6.0%.
Ngesifo sikashukela, izinso zivame ukuhlupheka, ngakho-ke, ukuqashwa kwelabhoratri ngesimo sezinso kubaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela. Lokhu i-urinalysis ye-microalbuminuria.
Lapho isihlungi sezinso silimele, ushukela, amaprotheni, nezinye izinto ezivame ukungadluleli esihlungweni ziqala ukungena kumchamo. Ngakho-ke i-microalbumin (i-albhamuin encane) iprotheni yesisindo ephansi kakhulu etholakala kumchamo okokuqala. Kulabo abanesifo sikashukela, i-urinalysis ye-microalbuminuria kufanele ithathwe njalo ezinyangeni eziyisithupha.
Ngamangala kamuva nje lapho ngithola ukuthi kwezinye izindawo, abanesifo sikashukela banquma ushukela emchameni. Lokhu akudingekile. Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi umkhawulo wezinso we-glucose kumchamo ungumuntu ngamunye kakhulu futhi akunakwenzeka ngokuphelele ukugxila kukho. Ngekhulu lama-21, kusetshenziswa kuphela ukuhlolwa kwegazi kwe-glucose ne-glycated hemoglobin ukuthola nokuhlola isinxephezelo sikashukela.
Ngokwanda ushukela ngaphezulu kokujwayelekile, kwenzeka isimo lapho umuntu ehlangabezana khona nokoma okungapheli futhi akhishwe umchamo omkhulu. Umile uvuka ngoba uketshezi oluningi luphuma emzimbeni. Izinso zethu zisebenza njengesihlungi, umsebenzi waso ukukhipha izinto eziyingozi emzimbeni futhi zigcine ezisebenzayo.
Kubalulekile! Uma nje izinga likashukela wegazi lihlala lilijwayelekile - izinso azilukhihli umchamo. Lapho lelo zinga lidlula inani elijwayelekile, izinso azikwazi ukubamba ushukela "owedlulele" egazini futhi ziqala ukungena kumchamo. Kepha ushukela ungakhishwa emzimbeni kuphela ngoketshezi lapho luhlakazeka khona.
Kungakho ukoma kuphakama: lonke amagremu kashukela omchamo “ahoxa” inani elithile lamanzi (13 g g). Ukuntuleka koketshezi emzimbeni kufanele kuphinde kugcwaliswe, ngakho-ke lezo ziguli ezinamazinga kashukela egazi ziphakeme, zizwa umuzwa onamandla wokoma.
Uma nje izinga likashukela wegazi lihlala lilijwayelekile, ushukela awangeni kumchamo. Kodwa lapho nje ushukela wegazi ukhuphuka ngenhla kweleveli ethile (endaweni ethile ezungeze 10 mmol / l), ushukela ungena kumchamo. Lapho ushukela omningi ukhanywa emchameni, amandla amancane amaseli omzimba atholakala ngokuphila, kuba ngcono umuzwa wendlala nokoma.
Izinga eliphansi loshukela wegazi lapho ushukela wegazi uqala ukungena khona umchamo libizwa ngokuthi umbundu wezinso.
Umkhawulo ojwayelekile wezinso ngu-9-10 mmol / L. Kepha kubo bonke abantu, leli zinga lihlukile. Izinga lomkhawulo wezinso liguqulwa kukho konke impilo: liphansi ezinganeni, ngesikhathi sokugula okungathi sína noma ngesikhathi sokukhulelwa, liyancipha kubantu asebekhulile. Zonke iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zazi isilinganiso sazo sezinso.
Ezinye izindaba ezinhle: UMnyango Wezempilo uvikele ukwamukelwa kohlelo olukhethekile olunxenxa izindleko zomuthi wonke. E-Russia nakwamanye amazwe e-CIS abanesifo sikashukela ngaphambili UJulayi 6 angathola ikhambi - MAHHALA!
Akumele uvumele ushukela, obalulekile kumaseli omzimba wakho, ukuwushiya nomchamo. Kuyafana nokuthela igesi emathangini egesi avuzayo emotweni. Okungakanani ongakuthelanga - imoto ngeke ihambe.
Umuntu kufanele anciphise izinga likashukela egazini, njengoba ukuncipha kwesisindo kumile, ukoma kuyanyamalala, inani lomchamo ogcotshwayo liba yinto evamile, impilo nokusebenza ngcono.
Ungasetha umkhawulo wakho wezinso usebenzisa itafula elilula elidinga ukugcwaliswa kaningana. Kuzoba nezinkomba ezimbili kuphela: izinga likashukela wegazi kanye noshukela omchamo wemizuzu engamashumi amathathu.
Ukuqapha Uyini umchamo wemizuzu engamashumi amathathu? Kufanele ukhulule isinye. Lo mchamo awudingeki. Ngemuva kwalokho ulinganisa izinga likashukela wegazi bese ufaka umphumela kukholamu yokuqala yetafula. Ngemuva kwemizuzu engama-30, uqoqa ingxenye entsha yomchamo bese ulinganisa izinga likashukela kulo.
Le nkomba oyifaka kukholamu yesibili. Ngemuva kokulinganisa okuningana, kuzocaca kuwe - ukuthi yiliphi izinga likashukela egazini eliqala ukungena kumchamo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi umuntu ngamunye ungumuntu ngamunye, ngakho-ke akunakuba nesici esisodwa. Imvamisa, isilinganiso somkhawulo wezinso sivela ku-8.5 kuya ku-11 mmol / L. Kunoma ikuphi, kufanele usethe inani lomkhawulo wezinso zakho.
Ngoshukela wegazi we-10 mmol / L, izinga likashukela lomchamo liyi-1%. Lokhu kusho ukuthi umkhawulo wezinso usuwedlulisiwe, ngoba kunoshukela omningi emchameni.Njengoba kunoshukela wegazi we-9.2 mmol / l, akukho shukela emchameni, okusho ukuthi izinga likashukela wegazi lingaphansi komkhawulo wezinso. Kepha ngezinga likashukela wegazi elingu-9.7 mmol / l, kwavela imichilo yeshukela (0.5%) ngomchamo. Ngakho-ke, izinga lomkhawulo wezinso esibonelweni sethu ngu-9.5-9.7 mmol / L.
Ushukela ojwayelekile kanye nokuphakanyiswa komchamo. Ushukela emchameni
I-urine glucose iyinkomba eyethusayo. Akubona abantu abaningi bazi ukuthi ushukela umchamo utholakala kubantu abaphilile ngokuphelele, ngamanani amancane kuphela. Izinga le-glucose liphansi kakhulu ukuthi izivivinyo nokuhlaziya azilichazi nhlobo. Lapho inkomba iba phezulu, ukuhlolwa noma ukuhlaziya kukhombisa umphumela ngaso leso sikhathi kanye nokuba khona kweglucose emchameni.
I-Glucosuria nemiqondo ejwayelekile
Abaningi banesifiso sokuthi kungani i-glucose ivela kumchamo - kusho ukuthini lokhu futhi kuyinkomba yokuthi yisiphi isifo esingangezelwa ushukela ezindlebeni?
Ngomchamo, ubuthi obuyingozi nezinto zokuqhekeka ziyasuswa emzimbeni. Ukudlula kwegazi ezinsweni, njengokuhlunga, kukhululwa ezintweni eziyingozi. Ngokwemvelo, igazi liqukethe ushukela, lidlula kuma-sitrobheni kanye nama-tubules, ushukela usucutshungulwa ngumzimba ngosizo lwe-insulin. Le yinqubo eyinkimbinkimbi, kepha ekugcineni kwayo ushukela umchamo uhlala, kepha ngenani elincane.
I-glucose ephakanyisiwe emchameni ivela ngezizathu eziningana. Isimo esifanayo sibizwa ngokuthi yi-glucosuria.
IGlucosuria inezinhlobo eziningi:
I-glucosuria yomzimba ayithathwa odokotela njengesifo noma isimo se-pathological. Kwenzeka ngenxa yezizathu eziningi futhi kuvame ukudinga ukuxilongwa kabusha. Lapho wenza ucwaningo, ukuhlaziya kungakhombisa umphumela ohluke ngokuphelele.
Icebo! Kulokhu, izivivinyo ezengeziwe ziyadingeka ukuthola imbangela ye-glucosuria. Kodwa akuyona into engjwayelekile ukuthi ushukela emchameni uvele ngenxa yokungondleki okungafanele, uthathe imishanguzo.
Okubalulekile: Ukunqunywa kwe-glucose kumchamo kwenziwa kusetshenziswa izifundo eziningana. Kwesinye isikhathi, njengendlela yokuxilonga, kwanele ukumane udlulise umchamo wokuhlaziywa kwamakhemikhali.
Izimbangela ze-glucosuria ye-pathological
Izimbangela ze-glucose kumchamo zingahluka, imvamisa ushukela lapho ukhona ukulandela izifo:
Isifo sikashukela mellitus. Isifo sezinso kanye namanyikwe. Izinsimbi zobuchopho. I-Hyperthyroidism Izifo ezithathelwanayo. Ubuthi obunobuthi.
I-urinary glucose kushukela likhuphuka ngezizathu eziningana. Ushukela wegazi ungaphansi futhi umchamo uphakeme. Isizathu esikhulu salokhu kwenzeka ukuntuleka kwe-insulin, okubandakanyeka ekusebenziseni ushukela emzimbeni.
Amaprotheni kanye noshukela omchamo avela lapho kunesifo sezinso. IJade namanye ama-pathologies angaholela kushukela namaprotheni emchameni. Ngenxa yalesi sizathu, uma umphumela wokuhlaziya kukhombisa ubukhona be-protein ne-glucose kumchamo, kuyasiza ukwenza i-ultrasound yezinso bese uthintana nodokotela oyi-nephrologist.
Ukuzimisela kwe-glucose kumchamo nakho kwenziwa nge-pancreatitis. Ukuphazamiseka kwama-pancreas kuholela ekukhiqizeni okunganele kwe-insulin. Ukudla okungenampilo, umuthi noma utshwala kungathinta le nqubo.
I-glucose egazini nomchamo ungakhula lapho kukhona ukwakheka kwengqondo ebuchosheni. Ngenxa yalesi sizathu, lapho kunezimpawu ezihambisanayo, kuyadingeka ukwenza i-MRI noma okungenani i-x-ray yesikhumba.
I-Hyperthyroidism ngesinye isizathu amazinga we-urine ushukela angakhuphuka. Ukuxilonga ngokunembile, kudingeka izifundo eziningi ezingeziwe. Dlulisa ukuhlolwa kwama-hormone, thintana nodokotela oyi-endocrinologist.
Kubalulekile! I-urinalysis yi-glucose, lapho izinga elingaphezulu kwezinga elamukelekayo lingakhombisa khona ukuthi umuntu unesifo esithathelwanayo. Isibonelo, ushukela ukhuphuka nge-meningitis - ukuvuvukala kokuya esikhathini.
I-glucose kumchamo wesibili ingadlula amazinga amukelekile wobuthi obunobuthi. Ezinye izinto ezinobuthi zithinta umzimba ngendlela yokuthi ziphazamisa ukukhiqizwa kwe-insulin, zithinte ukusebenza kwezinso namanyikwe, okuholela ekwandeni kwamazinga kashukela.
Ukunaka! Umchamo wesibili wakheka emgudwini wezinso, ugxiliswa kakhulu kunowokuqala. Umchamo wesibili akufanele ube noshukela noma ama-amino acid.
I-glucose kumchamo ngesikhathi sokukhulelwa inyuka uma owesifazane eba nesifo sikashukela kubantu besifazane abakhulelwe. Kodwa-ke, izinga likashukela wegazi kwabesifazane liqiniswa ngumzimba. Lapho ukukhulelwa kwenzeka, inqubo yokulawulwa kwe-glucose iqala. Uma ukwanda kweshukela kumchamo kanye negazi kuthatha isikhathi, lokhu akubonisi i-pathology. Imbangela yalesi simo kungaba ukucindezela noma ukungondleki.
I-glucose kumchamo wengane ikhuphuka ngenxa yezizathu eziningana. Ingane elunyelwe ingathola ushukela owedlulele ngobisi lukamama. Futhi i-glycemia ingaba yisizathu sokukhula kwezinkomba.
Ukuqapha: Uma izinga likashukela liphezulu kakhulu, izifundo eziningana zokuxilonga ziyadingeka. Ingane kufanele ivakashele udokotela wobugqila, udokotela wobuchwepheshe, udokotela wobudokotela kanye nodokotela wezinzwa. Okubalulekile: Uma sikhuluma ngesifo sikashukela, khona-ke ngokwengeza ushukela omningi kumchamo, ingane noma umuntu omdala anganuka njengama-apula noma uviniga ophuma emlonyeni.
Kusetshenziselwa ukuhlolwa okwengeziwe Kungumthwalo weglucose. Abaniki umchamo wokuhlaziywa, kepha igazi. Ucwaningo lukhona ukuthi elabhorethri, igazi ligcwele ushukela, ngokubheka kwesisindo sesiguli. Umthwalo onjalo ukuvumela ukuthi unqume ukuntuleka kokukhiqizwa kwe-insulin egazini futhi uhlole ngokufanele.
Izinga le-glucose kumchamo liyahluka lisuka ku-8,8 liye ku-10 mmol / l womchamo. Ukweqisa izinkomba kancane akuyona inkomba ye-pathology. Kepha uma kungenzeka, kuyasiza ukwenza izifundo eziningi ezingeziwe.
Ungawuqoqa kanjani umchamo
Unganquma izinga likashukela kumchamo ekhaya, kepha uma kudingeka ukuthi kuhlolwe elebhu, khona lapho kuyenziwa ukuhlolwa ngezindlela ezininganaFaka isicelo:
ukuhlolwa komchamo wasekuseni: Ukuqoqa umchamo wansuku zonke wokuhlaziya, ukuhlolwa komchamo, oqoqwa ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku.
Imvamisa basebenzisa imichilo yokuhlola ukuthola ushukela kumchamo, bacwilisa ngethhubhu lokuhlola noma udoti, bese-ke, ngokususelwa kumbala wephepha, izinga likashukela linqunywa. Uma imichilo yokunquma ushukela kumchamo ithole i-hue ekhanyayo eluhlaza, khona-ke izinga likashukela kumchamo lingaphansi kwemikhawulo ejwayelekile. Ngokuhlaziya okunjalo, ingxenye yomchamo wasekuseni kufanelekile.
Iqoqwe ngendlela ekhethekile. Kungcono ukusebenzisa isitsha esikhethekile sokuqoqa. Udinga ukuthi unikeze isilinganiso esijwayelekile senqubo yokuhlanzeka ngaphambi kokuziphatha. I-crotch ihlanzwa kusetshenziswa insipho engathathi hlangothi. Izinqubo zokuhlanzeka ziyadingeka ukuze kuqedwe amagciwane, amanye awo abola ushukela.
Ukuhlolwa kweglue yomchamo kungenziwa kaninginingi. Uma izinga likashukela liphakeme, khona-ke lokho kuhlaziywa kufanele kuphindwe. Imvamisa, ushukela ukhuphuka ngokungondleki, udla ama-carbohydrate amaningi.
Ukuvela kweshukela emchameni kungabhekwa njenge-pathology, uma ngabe lesi simo asisijwayelekile emvelweni. Ngaphandle kwalokho, sikhuluma nge-glucosuria ye-pathological. Lesi simo singaba uphawu lokugula okungathi sína.
Ushukela kumchamo: okujwayelekile, izimbangela zokukhuphuka ushukela emchameni
Imvamisa i-glucose idlula kusihlungi sezinso, okuthiwa yi-glomeruli. Kepha, ngaphandle kwalokhu, kubantu abaphilile bangeniswa ngokuphelele egazini ezingxenyeni zezinso. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi i-glucose kubantu abanempilo ayinakuba semchameni. Ngokuqondile, iqukethe inani elithile le-glucose, okungajwayelekile ukuhlolwa kwelebhu, njengokuhlaziya kwe-biochemical noma yomchamo jikelele.
Icebo! Imvamisa, isimo sempilo sinqunywa inani le-glucose esegazini. Imvamisa yalesi sikhombisi yindawo ebizwa ngokuthi ngumkhawulo ka-8.8 kuya ku-9.9 mmol / L. Uma izinga likashukela wegazi likhuphuka, khona-ke ama-tubules we-renal ahluleka ukuthola i-glucose enjalo kusuka kumchamo ungene egazini.
Umphumela wale nqubo ukuvela ushukela emchameni, lapho kwezokwelapha unegama elithi glucosuria. Umkhawulo osunguliwe wokuba khona kweshukela egazini uya ngokuncipha ngokuhamba kweminyaka, futhi le nkomba nayo ingahle ibe ngaphansi ngenxa yezifo zezinso ezinhlobonhlobo.
Kungakho ukuba khona koshukela kumchamo kungabangelwa ukwanda koshukela wegazi noma ukuncipha komkhawulo wezinso. Ngombono wezokwelapha, izinhlobo eziningana ze-glucosuria ziyahlukaniswa. Ifomu lokuqala libizwa ngokuthi yi-alimentary glucosuria.
Le nto iqala ukwanda ngenxa yesikhashana esifushane sikashukela wegazi ngenxa yokudla ukudla okune-carbohydrate eningi. Ifomu lesibili libizwa ngokuthi yi-glucosuria engokomzwelo. Kulokhu, ushukela uvela umchamo wokucindezelwa okwaba nakho kamuva. Futhi, ushukela kumchamo ungavela ngesikhathi sokukhulelwa.
Ngaphezu kwalokho, kungatholakala ifomu le-pathological, elihlanganisa i-glucosuria eyengeziwe. Ngalesi simo, ushukela emchameni uvela nezinga elikhuphukile loshukela egazini. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ushukela ungabonakala ku-urinalysis. Enye imbangela enjalo isifo sikashukela.
Kulokhu, ukuvela koshukela emchameni wesiguli onesifo sikashukela kwenzeka ngezinga eliphakeme kashukela egazini. Imvamisa lokhu kwenzeka nge-insulin exhomeke kwisifo sikashukela. Konke kulele ekutheni ukufakwa kweshukela egazini ezingxenyeni zezinso kungenzeka kuphela ngokufaka i-phosphoryating nge-enzyme ebizwa ngokuthi i-hexokinase.
Kodwa-ke, kushukela, le enzyme yenziwe nge-insulin. Kungakho umkhawulo wezinso ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 ungaphansi kunokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi sokuthuthukisa izinqubo ze-sclerotic kwezicubu zezinso, izinga likashukela lizoba liphezulu egazini, futhi ngeke litholakale umchamo.
Kubalulekile! Futhi, ukubonakala ushukela emchameni kungenzeka ngenxa yokuqina kwesikhumba pancreatitis. Phezu kwalesi sifo, ezinye izifo ezithile zingadala ukuvela kweglue emchameni. Ngakho-ke, isimila sobuchopho, i-meningitis, ukulimala kobuchopho obuhlukumezekile, unhlangothi lwe-hemorrhagic noma i-encephalitis kungaholela ku-glucosuria yemvelaphi ephakathi.
I-glucosuria yomkhuhlane ibangelwa izifo ezihambisana nomkhuhlane. Ngokunyuka kwe-adrenaline, ama-glucocorticoid mahormone, i-thyroxine noma ama-hormone okukhula, kuvela i-endocrine glucosuria. Ngaphezu kwalokho kune-glucosuria enobuthi, eyenzeka lapho enoshevu nge-morphine, i-strychnine, i-chloroform ne-phosphorus. I-glucosuria ye-renal iyakhula ngenxa yemikhawulo ephansi yezinso.
Ngaphezu kwezinhlobo ezinjalo, ama-glucosuria aphansi nawesekondari nawo ahlukile. Okuyinhloko kwenzeka lapho kungekho glucose egazini noma ukwehla kancane. Isibili likhula ezifweni zezinso ezinjenge-nephrosis, pyelonephritis engapheli, ukwehluleka kwezinso okulimazayo kanye nesifo sikaGirke.
Ukuvezwa kwezinga le-glucose kumchamo kubaluleke kakhulu, ngoba kungakhombisa ukuthuthukiswa kwezifo ezimbi kakhulu. Ngakho-ke, uma ushukela utholwe ekuhlolweni komchamo wakho, kufanele uthintane nochwepheshe ngokushesha.
Izimbangela ze-glucose emchameni
Njengoba sekwaziwa, izifo ezahlukahlukene zingaba imbangela kashukela emchameni. Kepha izimbangela zokuqala zale nto zibhekwa njengokwanda kokuhlushwa ushukela wegazi, ukwephulwa kwenqubo yokuhlunga ezinsweni, kanye nokubambezeleka kokuphinda kusayinwe ushukela ezihlangwini ze-renal tubules.
Ukuze unqume kahle izizathu ezivame kakhulu zokuthola i-glucose kumchamo, kuyadingeka ukuthi igama lezifo ezithinta ukubonakala kwalo. Lokhu ngokuyinhloko isifo sikashukela i-mellitus, i-hyperthyroidism, izifo zesibindi ezinzima, kanye nobuthi obukhulu nge-carbon monoxide, phosphorus, morphine ne-chloroform.
Ngaphezu kwalokho, lezi zimbangela zifaka nokucasulwa kohlelo lwezinzwa oluphakathi nendawo nokulimala kobuchopho kobuchopho, i-cerebral hemorrhage, i-acephalitis eyingozi noma ukubanjwa kwesithuthwane. Kuyiqiniso, i-pathology ye-tubules yezinso kanye ne-glomeruli, phakathi kwazo kukhona izifo ezithathelanayo ezinzima, i-glomerulonephritis, ne-nephritis ephakathi nendawo, nayo idluliselwa kwizimbangela.
Ukuze uhlole ushukela umchamo, kufanele uqale uqoqe umchamo wasekuseni okungenani wamamililitha ayikhulu namashumi amahlanu esitsheni esihlanzekile nesomile. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukuletha lo mkhumbi egumbini lokucwaninga ngaphansi kwesivalo esivaliwe. Ngaphambi kokuqoqa umchamo, geza ngokucophelela i-perineum ngamanzi afudumele usebenzisa insipho engathathi hlangothi.
Iqiniso liwukuthi ngokuhlangana nomchamo, ama-virus angafaka lokho kunciphisa ushukela ngokushesha. Kungakho kufanele uzame ukuze umchamo owethelwe elabhoratri ungabi nokungcola. Ngaphezu kwalokho, zama ukuletha umchamo ungakapheli amahora ayisithupha ngemuva kokuqoqwa.
Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthatha ukuhlolwa umchamo nsuku zonke. Iqoqo lomchamo esikebheni somnyama seglasi owomile usuku lonke. Lokhu kuhlaziya kunikeza imininingwane enembile futhi ephelele mayelana nenani likashukela kumchamo. Kodwa-ke, ukuthola isinqumo se-glucose kumchamo elabhorethri, kuthathwa kuphela izigidigidi eziyikhulu namashumi amahlanu inani eliphelele, eliyohlolwa.
Namuhla, kunezinye izindlela zokuthola ushukela emchameni. Isibonelo, kungaba yimichilo yezinkomba noma izixazululo. Izindlela ezinjalo zihlobana namasu wekhwalithi. Kodwa-ke, kunezindlela zokulinganisa ezinquma nokubala inani le-glucose kumchamo.
IGlucose (ushukela) kumchamo - glucosuria
Ngaphandle kokuthi i-glucose idlula ekuhlungweni kwezinso (glomerulus), kubantu abaphilile ibuyiselwa ngokuphelele (icwiywe egazini) kuma-renal tubules. Ngakho-ke, ushukela ojwayelekile awukho emchameni. Ukuze ucace kakhudlwana, umchamo uqukethe inani elincane loshukela, elingatholakali izindlela ezijwayelekile zokucwaninga elebhu (i-urinalysis ejwayelekile, ukuhlaziya umchamo biochemical).
Ngokukhuphuka kweglucose yegazi (ngaphezu kwe-8.8 - 9.9 mmol / l), ama-bubules wezinso awasakwazi ukubuyisa isamba elinjalo likashukela lisuka kumchamo libuyele egazini. Ngenxa yalokho, ushukela uvela kumchamo - glucosuria. Izinga likashukela wegazi lika-8.8-9.9 luhlobo lwenani lokubhula. Lo mngcele uyancipha ngeminyaka, futhi nangasemuva kwezifo ezahlukahlukene zezinso.
Ngakho-ke, i-glucosuria ingavela ngokunyuka kwamazinga kashukela egazini, kanye nokwehla komkhawulo wezinso. Ngokusekelwe kukho konke okungenhla, okulandelayo amafomu eglucosuria:
I-Physiological: I-Alimentary glucosuria - ikhula njengomphumela wokukhuphuka kwesikhashana kwamazinga kashukela egazini ngaphezulu kwenani lokubhala lezinso ngemuva kokudla ukudla okune-carbohydrate. I-glucosuria ye-Emotional - amazinga kashukela wegazi angakhuphuka kakhulu ngenxa yengcindezi. Ngokukhulelwa, i-glucosuria engokomzimba kwabesifazane abakhulelwe
Okwengeziwe - Kuvela ngokunyuka kweglucose yegazi.
Isifo sikashukela mellitus. Kufanele kushiwo ukuthi uma kwenzeka kunenkinga yesifo sikashukela esincike ku-insulin, ushukela omchamo uvela kumanani aphansi weglucose kunalawo asemkhawulweni ojwayelekile. Iqiniso ngukuthi ukucwaswa kweglucose emithanjeni yezinso kungenzeka kuphela nge-phosphorylation ye-enxmein hexokinase, futhi le enzyme icushiwe yi-insulin.
Ithiphu: Ngakho-ke, umkhawulo wezinso we-glucose ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo I ungaphansi kunokujwayelekile.Ngaphezu kwalokho, ngokuthuthukiswa kwezinqubo ezinzima ze-sclerotic izicubu zezinso (isifo sikashukela), naphezu kwezinga leglucose legazi, kungenzeka kungatholakali umchamo.
I-Glucosuria yemvelaphi ephakathi - isimila sobuchopho, ukulimala kobuchopho, i-meningitis, i-encephalitis, i-hemorrhagic stroke. I-Feverish G. - ngokumelene nesizinda sezifo ezihambisana nomkhuhlane. I-Endocrine G. - ngokwenyuka kokukhiqizwa kwe-thyroxine (hyperthyroidism), ama-glucocorticoid mahomoni (Itsenko-Cushing's syndrome), i-adrenaline (pheochromocytoma), somatotropin (acromegaly). I-Glucosuria uma unobuthi (ubuthi) - ubuthi nge-chloroform, i-morphine, i-phosphorus, i-strychnine. I-Renal (renal) G. - ikhula njengokwehliswa komkhawulo wezinso. Isisekelo se-renal G. - isifo sikashukela se-renal - akukho ukukhuphuka kweglue glucose, noma izinga laso liyancipha kancane. I-Second renal G. - iba lapho ama-tubules elimele ezifweni zezinso zezinto eziphilayo: i-pyelonephritis engapheli, i-nephrosis, ukwehluleka kwe-renal kwe-acute (ukwehluleka kwe-renal renal), isifo sikaGirke (glycogenosis, isifo se-glycogen).
Njengoba uqonda manje, inkomba efana ne-glucose kumchamo (noma njengoba bethi "ushukela kumchamo") ibaluleke kakhulu, ngoba ingahambisana nezifo ezinamandla. Uma kwenzeka kutholwa i-glucosuria, kuyadingeka ukuthi ubonane nodokotela oyi-urologist noma udokotela oyi-endocrinologist.
I-Urinalysis yesifo sikashukela
Ukuhlolwa komchamo kwesifo sikashukela kunikeza i-endocrinologist ithuba lokuhlola isimo sempilo se-urethra yesiguli. Esikhathini sikashukela, lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ku-20-40% yamacala, kulimala kakhulu izinso. Ngakho-ke, ukwelashwa kweziguli kuyinkimbinkimbi, kuvela izimpawu ezihambisana nakho, futhi amathuba ezinqubo ezingenakuphikwa ayanda.
Ngidinga ukuhlolwa nini?
Ukuhlolwa okujwayelekile komchamo wesifo sikashukela kufanele kwenziwe okungenani izikhathi ezingama-2-3 ngonyaka, uma nje umuntu ezizwa kahle. Kaningi (ngokuya ngezincomo zikadokotela) udinga ukuhlaziya uma:
Owesifazane onesifo sikashukela ukhulelwe, aqondane, futhi azikho isifo esibucayi kakhulu (isb. ukubanda) isifo sesitholakele egazini lesiguli, kunezinkinga nge-urethra, kukhona amanxeba angapholi isikhathi eside, kukhona noma ngabe kukhona izifo , kukhona izifo ezingamahlalakhona ezihlala ziphindaphindeka ngezikhathi ezithile, kunezimpawu zokuncipha kwesifo sikashukela: ukungakwazi ukwenza umsebenzi wokuzivocavoca, ukunciphisa isisindo ngokuzumayo, ukushintshashintsha kwezimo njalo ku-uro ukuzwa ushukela egazini, ukwazi ukungasebenzi kahle, njll.
Odokotela batusa ukwenza ukuhlolwa komchamo wasekhaya usebenzisa isivivinyo uma umuntu onesifo sohlobo I:
kuzwakala kubi, ngokwesibonelo, kuzizwa kunenkani, kuyisiyezi, kunoshukela ophakeme ongaphezu kwama-240 mg / dl, ibele noma isuthise ingane bese kuthi ngasikhathi sinye izwele ubuthakathaka obujwayelekile, ukukhathala.
Abantu abanesifo sohlobo II kufanele benze izivivinyo zomchamo ngokushesha ze-acetone uma:
Ukwelashwa kwe-insulin kuyenziwa, kutholakala inani eliphezulu le-glucose egazini (ngaphezu kwama-300 ml / dl), kunezimpawu ezingezinhle: isiyezi, ukoma, ubuthakathaka obujwayelekile, ukungaxineki, noma, ngokuphambene nalokho, i-passivity ne-lethargy.
Kwesinye isikhathi isiguli kufanele sithathe isivivinyo somchamo ukuthola impumelelo yokwelashwa. Uma kungekho zinguquko ezinhle emiphumeleni, i-endocrinologist kufanele ilungise umthamo womuthi noma iguqule into esebenzayo. I-Urinalysis yindlela yokulawula lesi sifo.
Izici zokulungiselela nokuhlaziywa
Ukulungiselela okhethekile ngaphambi kokuhlolwa kokudlula akudingekile. Kodwa-ke, ukuze ungathikamezi umbala womchamo, ungaphuzi iziphuzo nokudla okungathinta umthunzi we-ketshezi (ngokwesibonelo, ama-beet, izaqathe) ngaphambi kokuba uthathe lokho. Ungawuniki umchamo ngemuva kokudla imikhiqizo ekhethiwe, uphuzo oludakayo.
Siyini isifo sikashukela
Lesi yisifo sohlelo lwe-endocrine, lapho kukhiqizwa khona i-insulin noma ukuzwela kwezicubu zomzimba kuso. Igama elidumile lesifo sikashukela i-mellitus (isifo sikashukela) "yisifo esiphundu", ngoba kunenkolelo yokuthi amaswidi angaholela kule ndlela. Eqinisweni, ukukhuluphala yisici esiyingozi sesifo sikashukela. Lesi sifo uqobo sihlukaniswe izinhlobo ezimbili eziyinhloko:
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 (sincike kwe-insulin). Lesi yisifo lapho kungekho khona okwanele kwe-insulin. I-Pathology yisimo sentsha esingaphansi kweminyaka engama-30.
Thayipha isifo sikashukela sohlobo lwe-2 (okungeyona insulin). Kubangelwa ukukhula komzimba ukungatheleleki kwe-insulin, yize izinga layo esegazini lihlala livamile. Ukuphikiswa kwe-insulin kutholakala ku-85% wazo zonke izimo zesifo sikashukela. Kubangela ukukhuluphala, lapho amanoni evimba khona ukuthikamezeka kwezicubu ukungena kwi-insulin. Isifo sikashukela sohlobo 2 sitholakala kalula kubantu asebekhulile, njengoba ukubekezelela ushukela kancane kancane kuncipha njengoba bekhula.
Uhlobo 1 lwenzeka ngenxa yezilonda ze-autoimmune zamanyikwe nokubhujiswa kwamaseli akhiqiza i-insulin. Ezinye zezimbangela ezivamile zalesi sifo yilezi ezilandelayo:
imiphumela enobuthi yezidakamizwa, ama-nitrosamines noma ama-pesticides,
umphumela we-diabetogenic we-glucocorticoids, ama-diuretics, ama-cytostatics nezidakamizwa ezithile ze-antihypertensive,
ukuntuleka okungapheli kwe-adrenal cortex.
Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sikhula ngokushesha, kwesesibili - kunalokho, kancane kancane. Kwezinye iziguli, lesi sifo siqhubeka ngasese, ngaphandle kwezimpawu ezicacile, ngenxa yokuthi i-pathology sitholakala kuphela lapho kuhlolwa igazi nomchamo ushukela noma ukuhlolwa kwe-fundus. Izimpawu zezinhlobo ezimbili zikashukela zihlukile kancane:
Thayipha isifo sikashukela sokuqala. Kuhambisana nokoma okunzima, isicanucanu, ukugabha, ubuthakathaka kanye nokuchama kaningi. Iziguli zihlushwa ukukhathala okwandayo, ukungabi nalutho, umuzwa ongapheli wendlala.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2. Kubonakaliswa ukulunywa kwesikhumba, ukungaboni kahle, ukoma, ukukhathala kanye nokuzela. Isiguli asiphili kahle, izifo zesikhumba, i-gness kanye ne-paresthesia yemilenze ziyabonakala.
Kungani uhlolelwa isifo sikashukela
Umgomo oyinhloko ukuthola ukuxilonga okuqondile. Uma usola ukuthi unesifo sikashukela, kufanele uthintane nodokotela noma i-endocrinologist - uchwepheshe futhi unikeze ukuhlolwa okudingekayo noma kwelebhu. Uhlu lwemisebenzi yokuxilonga lubandakanya okulandelayo:
Ukukhetha okulungile komthamo we-insulin,
Ukuqapha amandla wegciwane elilungiselelwe, kubandakanya nokudla kanye nokuhambisana
ukuzimisela kwezinguquko esigabeni sokunxeshezelwa kanye nokubolekwa kwesifo sikashukela,
Ukuziqapha kwamazinga kashukela,
Ukuhlola isimo sezinso namanyikwe,
ukuqapha ukwelashwa ngesikhathi sokukhulelwa unesifo sikashukela sokukhulelwa,
ukukhonjwa kwezinkinga ezikhona kanye nezinga lokuwohloka kwesiguli.
Yikuphi ukuvivinya okudingeka kudlule
Ukuhlolwa okuyinhloko kokuthola isifo sikashukela kubandakanya ukulethwa kwegazi nomchamo ezigulini. Lawa uketshezi oluphambili lomzimba womuntu, lapho kuguqulwa khona izinguquko ezahlukahlukene kushukela wesifo sikashukela - kwenziwa ukuhlolwa ukuze kutholakale bona. Igazi lithathwa ukuthola inani le-glucose. Ukuhlaziya okulandelayo kusiza kulokhu:
ukuhlolwa kwe-hemoglobin glycated,
isivivinyo se-serum ferritin,
Ngaphezu kokuhlolwa kwegazi, ukuhlolwa komchamo nakho kunqunyelwe isiguli. Ngalo, yonke inhlanganisela enobuthi, izinto zamaselula, usawoti kanye nezinhlaka eziyinkimbinkimbi zezinto eziphilayo ziqedwa emzimbeni. Ngokucwaninga kwezinkomba zomchamo, kungenzeka ukubona izinguquko esimweni sezitho zangaphakathi. Ukuhlolwa okuyinhloko komchamo wesifo sikashukela okusolisayo yile:
imvume yansuku zonke
ukuzimisela kobukhona bezidumbu ze-ketone,
Kunezivivinyo ezithile zokutholwa kwesifo sikashukela - zidlula ngaphandle kwegazi nomchamo. Ucwaningo olunjalo lwenziwa lapho udokotela engabaza ukutholakala kwesifo noma efuna ukufunda kabanzi lesi sifo. Lokhu kufaka lokhu okulandelayo:
Ngokuba khona kwamasosha omzimba kumaseli we-beta. Imvamisa, akufanele babe khona egazini lesiguli. Uma kutholakala amasosha omzimba kumaseli we-beta, isifo sikashukela noma isisusa saso kuqinisekisiwe.
Okokuvikela amasosha omzimba ukuya ku-insulin. Ama-autoantibodies umzimba owakhiqiza ngokumelene ne-glucose yakhe uqobo, kanye nezimpawu ezithile zikashukela ezincike ku-insulin.
On the okuhlushwa insulin. Kumuntu ophilile, okujwayelekile izinga le-glucose le-15-180 mmol / L. Amanani angaphansi komkhawulo ophansi akhombisa uhlobo 1 sikashukela, ngaphezulu kwenhla - hlobo 2 sikashukela.
Ngokucaciswa kwama-antibodies ku-GAD (glutamate decarboxylase). Lesi yisimo esidala esingumvikeli wesistimu yezinzwa. Itholakala kumaseli ayo kanye namaseli we-beta wamanyikwe. Ukuhlolwa kwesifo sikashukela sohlobo loku-1 kusikisela ukunqunywa kwama-antibodies ku-GAD, ngoba atholakala kwiziguli eziningi ezinalesi sifo. Ukuba khona kwabo kubonisa inqubo yokubhujiswa kwamaseli e-pancreatic beta. Ama-anti-GAD yizimpawu ezithile eziqinisekisa umsuka we-autoimmune wohlobo 1 sikashukela.
Ekuqaleni, ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile kwenziwa koshukela, okuthi kuthathwe ngalo emunweni. Ucwaningo lukhombisa izinga lezinkomba zeleveli yalolu kezi lwebhayoloji kanye nenani le-glucose. Okulandelayo, kwenziwa i-biochemistry yegazi ukuze kutholakale ama-pathologies wezinso, i-gallder, isibindi kanye nama-pancreas. Ngokwengeziwe, izinqubo ze-lipid, amaprotheni kanye ne-carbohydrate metabolic ziyaphenywa. Ngokwengeziwe ezifundweni ezijwayelekile neze-biochemical, igazi lithathwa ukuze lihlolwe. Ngokuvamile kunikelwa ekuseni nasesiswini esingenalutho, ngoba ngakho-ke ukunemba kokuxilongwa kuzoba ngaphezulu.
Lokhu kuhlolwa kwegazi kusiza ekuboneni izinkomba eziphambili zokulinganisa. Ukuphambuka kwenqanaba kusuka kumanani ajwayelekile kukhombisa izinqubo ze-pathological emzimbeni. Inkomba ngayinye ibonisa ukwephulwa okuthile:
Ukunyuka kwe-hemoglobin kukhombisa ukuqeda amanzi emzimbeni, okwenza umuntu omile kakhulu.
Lapho kufundwa ukubalwa kwe-platelet, i-thrombocytopenia (ukukhuphuka kwenani labo) noma i-thrombocytosis (ukwehla kwenani lalawa maseli egazi) kungatholakala. Lokhu kuphambuka kukhombisa ubukhona be-pathologies ehambisana nesifo sikashukela mellitus.
Ukunyuka kwesibalo se-leukocytes (leukocytosis) kukhombisa nokuthuthuka kokuvuvukala emzimbeni.
Ukwanda kwe-hematocrit kubonisa i-erythrocytosis, ukwehla kubonisa ukuthi une-anemia.
Ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile kwesifo sikashukela i-mellitus (KLA) kunconywa ukuthi kuthathwe okungenani kanye ngonyaka. Uma kwenzeka kubhekene nezinkinga, ucwaningo lwenziwa kaningi kakhulu - kufika ezikhathini ezi-1-2 ezinyangeni ezi-6. Imigomo ye-UAC yethulwe etafuleni:
Inani le-erythrocyte sedimentation rate, mm / h
Ukubalwa kweseli emhlophe, * 10 ^ 9 / l
Ukubala kweplatelet, 10 ^ 9 / L
Ku-mellitus yesifo sikashukela, isifundo esivame kakhulu ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical. Le nqubo isiza ukuhlola izinga lokusebenza kwazo zonke izinhlelo zomzimba, ukuthola ubungozi bokuhlaselwa yisifo sohlangothi noma ukushaya kwenhliziyo. Ku-diabetes, amazinga kashukela adlula ku-7 mmol / L ayatholakala. Phakathi kokunye ukuphambuka okubonisa ukuthi unesifo sikashukela, hluka uthi:
ukwanda okubukhali kwe-triglycerides,
ukwehla kwenani lamaprotheni,
ukwanda noma ukwehla kwenani lamaseli wegazi amhlophe nabomvu (amaseli amhlophe egazi, ama-platelet namaseli abomvu egazi).
I-biochemistry ye-capillary noma yegazi evela emthanjeni nayo idinga ukuthathwa okungenani kanye ezinyangeni eziyisithupha. Ucwaningo lwenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho. Lapho kukhishwa imiphumela, odokotela basebenzisa le mibandela elandelayo yezinkomba ze-biochemistry yegazi:
Inani le-cholesterol, mmol / l
Ingqikithi ye-bilirubin μmol / L
Nge-hemoglobin kushiwo umbala obomvu wokuphefumula wegazi, oqukethwe kumaseli abomvu egazi. Umsebenzi wayo ukudluliselwa kwe-oksijini kwezicubu ne-carbon dioxide kusuka kubo. IHemoglobin inezingxenyana ezimbalwa - A1, A2, njll. D. Enye yayo ibopha ushukela egazini. Ukuxhumeka kwabo kuzinzile futhi akunakuphikwa, i-hemoglobin enjalo ibizwa ngokuthi i-glycated. Yakhelwe njenge-HbA1c (Hb yi-hemoglobin, i-A1 ingxenyana yayo, kanti u-c uyisusa).
Ucwaningo lwe-hemoglobin HbA1c lukhombisa isilinganiso se-glucose ejwayelekile kwikota edlule. Inqubo ijwayele ukwenziwa ngemvamisa yezinyanga ezi-3, ngoba amaseli amaningi abomvu egazi aphila. Ngokunikezwa irekhodi lokwelashwa, imvamisa yalokhu kuhlaziywa kunqunywa ngezindlela ezihlukile:
Uma isiguli selashwa ngamalungiselelo e-insulin, khona-ke lokho kuhlolwa kwesifo sikashukela kufanele kwenziwe izikhathi ezi-4 ngonyaka.
Lapho isiguli singayitholi le mishanguzo, ukunikela ngegazi kunqunywa amahlandla ama-2 unyaka wonke.
Ukuhlaziywa kwe-HbA1c kwenziwa ekutholakaleni kokuqala kwesifo sikashukela nokuqapha ukusebenza kwezokwelashwa kwalo. Ucwaningo lubona ukuthi mangaki amangqamuzana egazi ahambisana nama-molecule eglucose. Umphumela uboniswa ngamaphesenti - lapho ephakeme, indlela esoshukela esindayo. Lokhu kukhombisa i-glycated hemoglobin. Inani layo elijwayelekile kumuntu omdala akufanele lidlule ku-5.7%, enganeni lingaba ngu-4-5,8%.
Le ndlela enembile kakhulu esetshenziselwa ukuthola izinga lokulimala kwamanyikwe. I-C-peptide iprotheni ekhethekile ehlukaniswe ne-molecule ye- “proinsulin” lapho kwakhiwa i-insulin kuyo. Ekupheleni kwale nqubo, ingena egazini. Lapho le proteni itholakala egazini, iqiniso liqinisekiswa ukuthi i-insulin engaphakathi isiyaqhubeka nokwakha.
Ama-pancreas asebenza kangcono, ephakeme lizinga le-C-peptide. Ukwanda okunamandla kwalesi sikhombisi kukhombisa izinga eliphezulu le-insulin - giprinsulinizm. Ukuhlolwa kwe-C-peptide kunikezwa ekuqaleni kwesifo sikashukela. Esikhathini esizayo, awukwazi ukukwenza. Ngasikhathi sinye, kunconywa ukukala izinga loshukela we-plasma usebenzisa i-glucometer. Inani lokuzila kwe-C-peptide ngu-0.78-1.89 ng / ml. Lezi zivivinyo zesifo sikashukela zingaba nemiphumela elandelayo:
Amazinga aphezulu we-C-peptide noshukela ojwayelekile. Ibonisa ukumelana ne-insulin noma i-hyperinsulinism esigabeni sokuqala soshukela sohlobo 2.
Ukwanda kwenani le-glucose ne-C-peptide kukhombisa ushukela ozimele osuvele uthuthukile.
Inani elincane le-C-peptide namazinga kashukela akhuphukile akhombisa ukulimala okukhulu kwe-pancreatic. Lokhu kungukuqinisekisa kwesifo sikashukela sohlobo 2 noma uhlobo 1 sikashukela.
Le nkomba isiza ukuthola ukumelana ne-insulin. Ukuzimisela kwayo kwenziwa uma kukhona izinsolo zokuba khona kwe-anemia esigulini - ukushoda kwensimbi. Le nqubo isiza ekunqumeni izinqolobane zomzimba wale nto yokulandela umkhondo - ukusilela kwayo noma okweqile. Izinkomba zokuziphatha kwalo yilezi ezilandelayo:
ukushuba nokuhlukaniswa kwamazipho,
isicanucanu, ukushisa kwenhliziyo, ukuhlanza,
Ubuhlungu obuhlangene nokudumba
Ubuhlungu bemisipha ngaphandle kokuzivocavoca.
Lezi zibonakaliso zikhombisa ukukhuphuka noma ukwehla kwezinga le-ferritin. Ukuhlola ubungako bezindawo ezihlala kuyo kulula kakhulu ukusebenzisa itafula:
Ukuhlushwa kwe-ferritin, μg / l
Iminyaka efika ku-5
Iminyaka kusuka eminyakeni engu-5
Le ndlela yokucwaninga ikhombisa ushintsho olwenzeka lapho umthwalo emzimbeni omelene nesizinda sikashukela.Isikimu senqubo - igazi lithathwa emunweni wesiguli, khona-ke umuntu uphuza isisombululo se-glucose, kuthi ngemuva kwehora kuphinde kuthathwe igazi. Imiphumela engaba khona ibonakaliswa etafuleni:
Ijubane loshukela, mmol / L
Inani le-glucose ngemuva kwamahora ama-2 ngemuva kokudla isixazululo se-glucose, mmol / l
Ukubekezelela ushukela okhubazekile
Umchamo uyinkomba ephendula kunoma yiluphi ushintsho ekusebenzeni kwezinhlelo zomzimba. Ngokusekelwe ezintweni ezifakwa kumchamo, uchwepheshe angakwazi ukubona ukuthi kukhona ukugula kanye nobucayi baso. Uma usola isifo sikashukela, kunakwa ngokukhethekile ezingeni ushukela womchamo, imizimba ye-ketone ne-pH (pH). Ukuphambuka kwamanani abo kokujwayelekile akubonisi nje kuphela isifo sikashukela, kodwa futhi nezinkinga zako. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukutholwa okukodwa kokuhlukumeza akubonisi ubukhona besifo. Isifo sikashukela sitholakala sinezinkomba zokuhleleka ezihlelekile.
Umchamo walokhu kuhlaziywa kumele uqoqwe esitsheni esihlanzekile, esingcolile. Amahora angu-12 ngaphambi kokuqoqwa, kuyadingeka ukuthi ungafaki noma yimuphi umuthi. Ngaphambi kokuchama, udinga ukugeza izitho zakho zangasese, kodwa ngaphandle kwensipho. Ocwaningweni, thatha ingxenye yomchamo eyisilinganiso, isb. kushoda inani elincane ekuqaleni. Umchamo kufanele uhanjiswe elebhu ngaphakathi kwamahora ayi-1.5. Umchamo wasekuseni, onqwabelene ngokomzimba ubusuku bonke, uqoqwa ukuze ulethwe. Lokho okunjalo kubhekwa njengokuphezulu, futhi imiphumela yokuhlolwa kwayo inembile.
Umgomo wokuhlola umchamo ojwayelekile (i-OAM) ukuthola ushukela. Imvamisa, umchamo akufanele ube nawo. Kuvunyelwe kuphela ushukela omncane kumchamo - kumuntu onempilo awudluli i-8 mmol / l. Isifo sikashukela, amazinga kashukela ahluka kancane:
Izinga loshukela esiswini esingenalutho, i-mmol / l
Izinga loshukela ngemuva kwamahora ama-2 ngemuva kokudla, i-mmol / l
Uma la manani ajwayelekile edlulwa, isiguli sizodinga ukuphumelela ukuhlolwa umchamo osuvele wansuku zonke. Ngaphezu kokuthola ushukela, i-OAM iyadingeka ukutadisha:
ikhwalithi nokwakheka komchamo, izakhiwo zawo, njengokubakhona kokudilizwa, ukuqaqeka, izinga lokubonakala,
ukuba khona kwe-acetone namaprotheni.
Ngokuvamile, i-OAM isiza ukuhlola izinkomba eziningana ezihlonza ukuba khona kohlobo 1 noma uhlobo 2 sikashukela nezinkinga zalo. Amanani abo ajwayelekile avezwa etafuleni:
Akukho. Kuvunyelwe ukufika ku-0,033 g / l.
Akukho. Kuvunyelwe ukufika ku-0,8 mmol / L
Kufika ku-3 emkhakheni wokubukwa kwabesifazane, ongashadile - owesilisa.
Kuze kube ngu-6 emkhakheni wokubukwa kwabesifazane, kuze kufike ku-3 - emadodeni.
Uma kunesidingo, kuyenziwa ukucacisa imiphumela ye-OAM noma ukuqinisekisa ukuthembeka kwabo. Ingxenye yokuqala yomchamo ngemuva kokuvuka ayibalwa. Ukubala sekuvele kusuka eqoqweni lesibili lomchamo. Lapho uchama ngakunye usuku lonke, umchamo uqoqwa esitsheni esisodwa esomile esihlanzekile. Yigcine esiqandisini. Ngosuku olulandelayo, umchamo uhlanganiswa, emva kwalokho ama-200 ml athululelwa kwelinye imbiza elomile elicwengekile. Lokhu okusetshenziselwa ucwaningo lwansuku zonke.
Le ndlela ayisizi kuphela ukubona isifo sikashukela, kepha futhi ihlola nobunzima besifo. Ngesikhathi sokufunda, izinkomba ezilandelayo zinqunywa:
5.3-16-16 mmol / usuku. - Kwabesifazane
7-18 mmol / usuku. - Okwabesilisa
Ngaphansi kwe-1,6 mmol / ngosuku.
I-55% yemikhiqizo ephelele ye-metabolic ye-adrenaline - i-adrenal hormone
Ukunqunywa kobukhona bezidumbu ze-ketone
Ngaphansi kwezidumbu ze-ketone (ngamagama alula - i-acetone) kwezokwelapha kuyaqondakala imikhiqizo yezinqubo ze-metabolic. Uma zivela kumchamo, lokhu kukhombisa ukuthi kukhona emzimbeni we-ukwephulwa kwamafutha ne-carbohydrate metabolism. Ukuhlolwa kwegazi okwelashwa okujwayelekile akukwazi ukuthola izidumbu ze-ketone emchameni, ngenxa yalokho, imiphumela ibhala ukuthi ayikho. Ukuthola i-acetone, ucwaningo olwenziwe ngomchamo lwenziwa kusetshenziswa izindlela ezithile, kubandakanya:
Ukuhlolwa kweNitroprusside. Kwenziwa kusetshenziswa i-sodium nitroprusside - i-vasodilator ephumelela kakhulu, i.e. i-vasodilator. Emvelweni we-alkaline, le nto ihlangana nemizimba ye-ketone, yakha inkimbinkimbi ye-pinkish-lilac, lilac noma nsomi.
Ukuhlolwa kukaGerhardt. Kuqukethe ngokufaka i-chloride evundile emchameni. I-Ketones iyayifaka ngombala we wayini.
Indlela kaNatelson. Kususelwa ekudingisweni kwama-ketones kusuka kumchamo ngokufakwa kwe-sulfuric acid. Njengomphumela, i-acetone ene-salicylic aldehyde yakha indawo ebomvu. Ukuqina kombala kukalwa ngokwezithombe.
Ukuhlolwa okusheshayo. Lokhu kufaka phakathi imichilo ekhethekile yokuxilonga kanye nemithi yokuhlonza ngokushesha ama-ketones kumchamo. Ama-ejenti anjalo afaka i-sodium nitroprusside. Ngemuva kokufaka ithebhulethi noma imichilo kumchamo, iphenduka ibe nsomi. Ukuqina kwayo kunqunywa isilinganiso sombala esijwayelekile esiya kusethi.
Ungahlola izinga lemizimba ye-ketone ngisho nasekhaya. Ukulawula amandla ashukumisayo, kungcono ukuthenga imicu eminingana yokuhlola ngesikhathi esisodwa. Okulandelayo, udinga ukuqoqa umchamo wasekuseni, udlule inani elincane ekuqaleni kokuchama. Ngemuva kwalokho umucu udonswa umchamo okwemizuzu emi-3, emva kwalokho umbala uqhathaniswa nobungako obuza nekhithi. Ukuhlolwa kukhombisa ukuhlangana kwe-acetone okungu-0 kuye ku-15 mmol / L. Ngeke ukwazi ukuthola izinombolo eziqondile, kepha unganquma inani elilinganisiwe kusuka kumbala. Isimo esibucayi yilapho umthungo on the strip ububende.
Ngokuvamile, ukuqoqwa komchamo kwenziwa njengokuhlaziywa okujwayelekile. Imvelo yezidumbu ze-ketone ukungabikho kwabo okuphelele. Uma imiphumela yocwaningo ilungile, khona-ke inani le-acetone liyindlela ebalulekile. Ngokuya kwalokhu, ukuxilongwa kutholakala futhi:
Ngenani elincane le-acetone kumchamo, i-ketonuria iyatholakala - ukuba khona kwama-ketones kumchamo kuphela.
Ezingeni le-ketone le-1 kuye ku-3 mmol / L, kutholakala ukuthi i-ketonemia iyatholakala. Ngayo, i-acetone nayo iyatholakala egazini.
Uma izinga le-ketone lidluliwe, i-3 mmol / L, ukuxilongwa yi-ketoacidosis ku-mellitus yesifo sikashukela. Lokhu ukwephula i-carbohydrate metabolism ngenxa yokushoda kwe-insulin.
Izinguquko ezithile zomchamo kuma-diabetes
Enye yezinkinga zesifo sikashukela ukungasebenzi kwezinso. I-Nephropathy iba ngenxa yokubhujiswa kodonga lwe-vascular lwe-renal glomeruli ngama-molecule eglucose. Umthwalo owandayo kulezi zitho zomzimba uhlotshaniswa neqiniso lokuthi kusukela ekuqaleni kwalesi sifo kukhona indle ebanzi yomchamo ukunxenxa ukugcwala okukhulu koshukela wegazi.
Izinguquko ezijwayelekile ezingatholakala ocwaningweni olujwayelekile lomtholampilo lubandakanya:
umbala: Ukuqedwa okukhulu kukamanzi kunciphisa ukugcotshwa kwemibala, ngakho-ke umchamo omningi ulula,
sobala: isampula linamafu lapho kwehlukanisa amaprotheni,
iphunga: iba yinhle lapho kuvela izidumbu ze-ketone,
amandla athile adonsela phansi: kukhuphuke ngenxa yokuhlushwa ushukela omningi,
amaprotheni iqala ukuvela kumchamo noma kungekho zimpawu zokulimala kwezinso,
ushukela unqunywa uma igazi lidlulwa Umbundu wezinso we-glucose (9.6 mmol / L),
imizimba ye-ketone kwembulwe ngokubola kwesifo sikashukela, ukwanda kwabo kungumgabha wekhozo,
amangqamuzana amhlophe egazi, amaseli abomvu egazi namasilinda khombisa ukuvuvukala kwemvelaphi ethelelekayo noma ye-autoimmune, i-nephropathy.
Ukuhlolwa komchamo okujwayelekile kwabanesifo sikashukela kunconywa okungenani kanye ezinyangeni eziyisithupha, ngokuya ngokujwayelekile kwangaphambilini. Uma umthamo wezidakamizwa ezinciphisa ushukela ukhethwe kahle, khona-ke akufanele kube khona ukuphambuka ocwaningweni.
Futhi nakhu okunye mayelana nomuthi iMetformin wesifo sikashukela.
I-Microalbumin - Lesi yisamba esincane samaprotheni avela kumchamo wesifo sikashukela ngaphambi kokuqala kokubonakaliswa kwemitholampilo. Ukuhlaziywa kusiza ukuthola i-nephropathy ngesikhathi sokuqala lapho izinguquko zisaphenduka ngokuphelele. Kuhlobo lokuqala lwesifo sikashukela, ucwaningo lukhonjiswa iminyaka emihlanu ngemuva kokudalwa, kanti ohlotsheni lwesibili, ucwaningo ngqo ngesikhathi sokuxilongwa. Ngemuva kwalokho, nganoma yikuphi ukuhlukahluka kwalesi sifo, kunconywa ukuthatha umchamo njalo ezinyangeni eziyisithupha kanye ezinyangeni ezi-6.
Ukunquma ngokunembile inani lamaprotheni amancane, umchamo wansuku zonke kufanele uqoqwe. Uma lokhu kunzima nganoma yisiphi isizathu, khona-ke ukuhlaziya kwenziwa engxenyeni eyodwa. Njengoba okuqukethwe kwe-microalbumin kuncike ekushintshashintsheni kwansuku zonke, futhi futhi kuya ngesilinganiso somsebenzi owenziwe ngokomzimba, umchamo we-umchamo uhlolwa kanyekanye. Ngokubaluleka kwesikhombi sokugcina, ukugxilwa komchamo kanye nesilinganiso se-creatinine ku-albhamuin kunganqunywa.
Imichilo ye-urine microalbumin strips
Ama-antibodies akhethekile angeniswa kusampula womchamo, abopha i-albhamuin. Ngenxa yalokhu, amafomu okulengiswa kwamafu, adonsa umsinga wokukhanya ngokuya ngokuqukethwe kweprotheni okukuwo. Inani eliqondile le-microalbuminuria linqunywa esikalini sokulinganisa.
Izifo ezilinganayo ezikhonjiswe ukuhlaziywa
Ukwephulwa okuvame kakhulu kokwakhiwa komchamo kwisifo sikashukela, ngaphezu kokubukeka kwe-glucose ne-protein, kunguquko ekwakhiweni kwe-cell pellet. Ukwanda kwesibalo esimhlophe segazi kutholakala ezifweni ezinjengokuthi:
i-pyelonephritis e-acute noma engamahlalakhona (ukuvuvukala kwe-renal pelvis),
glomerulonephritis (ukulimala kwe-glomerular),
inqubo yokuvuvukala ku-ureters, cystitis,
isifo sokuqaqamba kwamalunga kumadoda, i-prostatitis,
i-vaginitis kwabesifazane (uma ihlanganiswa nenhlanzeko enganele),
Inani elikhulayo lamangqamuzana abomvu egazi liyinkomba yokuphuma kwegazi ohlelweni lomchamo.
Abesifazane ababandakanyi ukuhlanganiswa kwegazi lokuya esikhathini. Imbangela ye-hematuria (igazi kumchamo) ingaba:
itshe, i-ureter, noma itshe lesinye
ukuminyana kwegazi eliphansi ngenxa yesifo noma i-overdose nama-anticoagulants,
i-nephropathy nge-hypertension, i-lupus erythematosus,
I-epithelium ye-Flat ngenani elikhulayo ikhombisa ukuvuvukala kwephephthi langaphansi lobufazi, kanti i-renal ivela kumchamo ngezifo, ubuthi nokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi. Ama-cylinders we-Hyaline angaba semchameni womuntu ophilile ngamanani amancane. Bawuphofu webhubhu lezinso. Uhlobo lwe-granular lwe-epithelium ye-cylindrical lubonwa ikakhulukazi ngomonakalo kwezicubu zezinso.
Ungakuthatha kanjani ukuhlolwa komchamo
Ukuhlolwa komchamo, njengomthetho, ukukhonzwa okukodwa, okuqoqwe ekuseni, kuyadingeka. Ukuthola imiphumela ethembekile, kufanele:
khansela okokuhlanza namakhambi ngezinsuku ezingama-2-3,
yeka ukuphuza utshwala nokudla okunemibala yokufakelwa imibala ngosuku - yonke imifino ebubende onsomi neyolintshi, izithelo, ukudla okunosawoti nakho akunconywa,
ungafaki imithwalo yezemidlalo emahoreni angama-18 ngaphambi kokuhlolwa.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubikwa elabhorethri, elihlaziya umchamo. Kumele kukhunjulwe ukuthi kufakwa emgqonyeni wokuthatha impahla ngesikhathi sokuya esikhathini futhi ezinsukwini ezi-3 ngemuva kokuqedwa kwayo. Kubalulekile ukugcina imithetho yokuhlanzeka komuntu. Ukuze wenze lokhu, ekuseni izitho zangasese zihlanzwa ngensipho bese zigezwa ngamanzi amaningi, zomiswe ngokuphelele.
Okokuqala udinga ukuchama endlini yangasese, bese kuba esitsheni esivalwe ngesivalo, ingxenye yokugcina nayo ayilungele ucwaningo. Ingxenye eqoqwe maphakathi nomchamo wasekuseni kufanele ibuyiselwe elabhorethi kungakapheli imizuzu engama-90 iqoqwe.
Lapho uqoqa umchamo wansuku zonke, uzodinga isitsha esihlanzekile noma imbiza engu-3-litre. Isikhathi sokuqala ekuseni isiguli sichama endlini yangasese. Isikhathi kufanele simakwe esitsheni, bese wonke umchamo ukhanywa lapho amahora angama-24. Isibonelo, isikhathi sinesishiyagalombili ekuseni, okusho ukuthi ukuvakasha kokugcina endlini yangasese akumele kube ngaphambi kuka-7-55 ngosuku olulandelayo.
Ngemuva kokuthi okuqukethwe kuqoqwe ngokuphelele, ivolumu ephelele kufanele ikhonjiswe kwifomu lokuqondisa. I-50 ml yenani eliphelele ihanjiswa elabhoratri.
Isitsha sokuqoqa umchamo
Imvamisa kubantu abadala nasezinganeni: izinkomba eziphambili
Isampula lomchamo kufanele lihlangabezane nezimpawu ezilandelayo:
amandla adonsela phansi kusuka ku-1004 kuye ku-1035 g nge-litre elilodwa,
acidity cishe 6,
umkhondo amanani wamaprotheni angekho ngaphezulu kuka-0, 140 g / l.
Ukuba khona kwe-bilirubin, ushukela, ama-ketones, ama-nitrites, ama-epithelium wezinso, amasilinda, amagciwane nosawoti akuvunyelwe. Ezinganeni, kungenzeka ukuthola ama-leukocytes ama-3-5 emseleni, amaseli ama-2 abomvu egazi. Emadodeni, kungenzeka kube khona okubonakalayo: Amaseli ama-3 amabi, inani elifanayo lamangqamuzana abomvu egazi nama-leukocytes angama-2-3. Ukuhlaziywa kubhekwa njengokujwayelekile kwabesifazane abanama-leukocytes ayi-6 noma ngaphansi, amaseli we-epithelial, amaseli ama-2 abomvu egazi.
Ukuhlanekezela kwemiphumela kubangelwa:
ukulayisha ngokweqile ngokomzwelo nangokomzwelo, lapho inani lamaseli abomvu egazi landa kancane, kuvela amasilinda wegogo,
umsoco onama-protein amaningi uholela ekubonakaleni kwawo umchamo naku-acidization yawo, ukudla okudla ubisi kuguqula i-pH ohlangothini lwe-alkali,
uketshezi ngokweqile ekudleni kwehlisa ukungalingani okuhlobene.
Bukela ividiyo ephathelene nokuhlaziywa komchamo:
Izinkomba ezingeziwe: imizimba yokugaya kanye ne-ketone
I-Diastase, noma i-alpha-amylase, iyi-enzyme ekhiqiza ama-pancreas ukugaya ama-carbohydrate. Kumuntu ophile kahle, akatholakali noma ukhona ngamanani aphansi kakhulu. Umsebenzi owengeziwe wenzeka lapho:
ukuqedwa komsele we-pancreatic ngetshe noma isimila,
Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, ukushintshwa kwe-diastase yegazi akuyona uphawu, ngenxa yalokho, isivivinyo sikhonza ukukhipha ukwanda okubonakalayo koshukela wegazi ngenxa yezifo ze-pancreatic.
Izidumbu zeKetone zivele egazini nomchamo ngokuqhekeka okuthe xaxa kwamafutha. Ngokuphendula okunjalo, umzimba uzivikela ekulweni nendlala nokushoda kwe-glucose emangqamuzaneni. Ama-acetoacetic kanye ne-hydroxybutyric acid, i-acetone esezingeni elitholwayo atholakala ngesikhathi sokubola kwesifo sikashukela. Ezitheni zobusha, lesi sifo sivame ukuqala nge-ketoacidosis enzima.
Izinguquko kuhlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2
Ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela i-mellitus, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, ushukela utholakala ikakhulukazi kumchamo. Lokhu kusho ukuthi ukujula kwayo egazini kukhuphuka kakhulu, isiguli singakunaki ukudla noma kuthathe isilinganiso esanele somuthi ukwehlisa ushukela wegazi. Lezi ziguli kudingeka zenze ukuhlolwa kwegazi nge-glucose ne-glycated hemoglobin.
Ngokusekelwe kule mininingwane, udokotela unquma umthamo owandayo wamaphilisi we-insulin noma amaphilisi antidiabetes.
Ngokuthuthuka kwe-nephropathy, izifo ezithinta umchamo zivame ukujoyina noma zitholakale njenge-pathology yangemuva efaka isandla ekulahlekelweni kwamaprotheni. Ezigulini ezinjalo, kubalulekile ukuqapha ukuhlolwa komchamo okungenani kanye ezinyangeni ezintathu ngemuva kokuthola ukuthethelelwa kwe-pyelonephritis noma i-cystitis.
Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, imichilo yokuhlola isetshenziselwa ukutholwa ngokushesha kwezidumbu ze-ketone. Lokhu kubheka kubaluleke kakhulu kwishukela sikashukela esinomkhuba wokuhoxa kanye ne-ketoacidotic coma.
Ukuhlolwa kwe-urinalysis kwesifo sikashukela kusiza ekutholeni izinguquko eziqondene nalesi sifo - ukwehla kwesibalo, ukuguquka kokuphendula uhlangothi lwe-acid, ukutholwa kweglucose kanye nemizimba ye-ketone. Ukuthuthukiswa kwe-nephropathy yesifo sikashukela kuboniswa ukutholwa kwamaprotheni. Ekutholakalweni kusenesikhathi, isetshenziswa ukuhlaziywa kwe-microalbuminuria. Ukuthola imiphumela ethembekile, kubalulekile ukuthi iziguli zilandele izincomo zokuqoqa umchamo.
Uma uhlobo 2 lwesifo sikashukela lusunguliwe, ukwelashwa kuqala ngokushintsha kokudla nezidakamizwa. Kubalulekile ukulandela izincomo ze-endocrinologist, ukuze ungasifaki lesi simo. Yiziphi izidakamizwa kanye nemithi emisha yohlobo 2 sikashukela oze nayo?
Uma kusolwa izifo ezithile (umdlavuza, i-pancreatitis, isimila, inhlama, i-cyst), i-pancreatic ultrasound imiselwe ushukela.Le ndlela engabizi ikuvumela ukuthi uthole izibonakaliso zokushintsha okuphazamisayo nezinkinga, ukusungula okujwayelekile ngosayizi omdala. Ungalungiselela kanjani? Kungani i-echogenicity iyadingeka?
Uma i-hyperparathyroidism isungulwe, ukwelashwa kuzohluka kuye ngokuthi isiguli sinaso yini isifo noma i-syndrome. Kwenzeka ngokuyinhloko nangesibili, kuveze ezinganeni. Ukuxilongwa kugcwele.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani isifo sikashukela singenzeka ezinganeni. Izimpawu zalo kanye nezimpawu zalo kuboniswa ukoma okuchazayo nokuchama. I-Diagnostics ifaka uchungechunge lokuhlola ukukhomba uhlobo oluphakathi nolwe-nephrogenic. Ukwelashwa kuhloselwe ukwehlisa umthamo wamanzi, ukunciphisa umchamo.
Ngeshwa, izifo ze-adrenal gland azihlali zinqunywa ngendlela yesikhathi. Kaningi kutholakala ukuthi zizalwa ezinganeni. Izizathu zingahle zingabi se-organ hyperfunction. Izimpawu kubantu besifazane, amadoda ngokuvamile afanayo. Ama-Assaw azosiza ekuboneni izifo.